ချွေးပေါက်ကို ပိုကျယ်စေတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းအမှား (၅) ခု - For her Myanmar
လှချင်ရက် စက်စက်ယိုပြီး လိမ္မော်သီးခွံမဖြစ်ရလေအောင်
ယောင်းတို့ရေ … ဒီနေ့ခေတ်မှာ မိန်းကလေးတော်တော်များများက မိတ်ကပ်ထက် skincare ဘက်ကို ခြေဦးလှည့်လာကြပါပြီနော်။ ဒါပေမဲ့လည်း တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလို ဒီလိုတွေအသုံးမှားရင်လည်း ချွေးပေါက်တွေကျယ်ပြီး လိမ္မော်သီးခွံဖြစ်လာတတ်တာမို့ သတိထားဖို့တော့ လိုပါပြီနော်…
(၁) အဆီစုပ်စက္ကူကို မကြာခဏသုံးတာ
မျက်နှာအဆီပြန်လာတိုင်း မိတ်ကပ်ကွက်မှာ စိုးရိမ်ပြီး အဆီစုပ်စက္ကူလေးတွေ ထုတ်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မျက်နှာမှာလည်း အပြင်က ဖုန်မှုန့်နဲ့ ပိုးမွှားတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အဆီပမာဏတစ်ခု ရှိရပါတယ်။ အဲ့အဆီလွှာကို မကြာခဏ အဆီစုပ်စက္ကူနဲ့ ဖယ်ရှားပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ချွေးပေါက်တွေ ကျယ်လာမှာ ကျိန်းသေပဲမို့ ခဏခဏ သုံးတာမျိုး ရှောင်ပါ ယောင်းရေ…
(၂) ဆားဝက်ခြံ၊ အဆီဖုနဲ့ ဝက်ခြံတွေညှစ်ပစ်တာ
Stella လို လက်အငြိမ်မနေတဲ့သူတွေက အားနေရင် ဆားဝက်ခြံတွေ ညှစ်လိုက်၊ အဆီဖုတွေ ညှစ်လိုက်လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံထွက်လာရင်လည်း လက်နဲ့ကလိလိုက်ရမှာလေ။ ဒီလိုညှစ်မိတဲ့အခါ အထဲမှာရှိနေတဲ့ အဆီတွေ၊ ပိုးမွှားတွေက ပိုကြီးလာပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်စေသလို လက်သည်းဆိပ်ကြောင့်လည်း အမာရွတ်တွေ ထင်ကျန်စေပါတယ်။
Related article >>> ဝက်ခြံအရမ်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီ (၆) ချက်ကို လုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်။
မျက်နှာလေးနုချင်ဇောနဲ့ နင်းကန်ကြေးချွတ်တာကို ရှောင်ပါ။ မျက်နှာကြေးချွတ်ဆေးထဲမှာပါတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတာမှန်ပေမဲ့ မကြာခဏဆိုရင် ချွေးပေါက်ကျယ်စေတာကြောင့် တစ်ပတ်နှစ်ခါထက် ပိုမလုပ်ဖို့လည်း သတိပြုစေချင်ပါတယ်နော်..
Stella တို့မိန်းကလေးတွေက နေ့တစ်ဝက်လောက်ကျိုးတာနဲ့ မိတ်ကပ်လေးဖို့လိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိတာမှတ်လား ? ဒါပေမဲ့ ခဏခဏမိတ်ကပ်ဖြန်ဖို့တာက အသားအရေအတွက်တော့ ဆိုးကျိုးတွေချည်းပါပဲ။ သိပ်သည်းလွန်းတဲ့ မိတ်ကပ်ကြောင့် ချွေးပေါက်တွေ ပိုပိတ်ပြီး ဝက်ခြံတွေထွက်၊ ကိုယ်ကညှစ်မိ၊ ချွေးပေါက်တွေကျယ်၊ အဆီပြန်၊ မိတ်ကပ်ဖို့နဲ့ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်နေတာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာ သကြားဓာတ်လွန်ကဲတဲ့အစားအစာတွေက ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။ အရမ်းစပ်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ ဆီကြော်မုန့်တွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကလည်း ဝက်ခြံတွေအဆက်မပြတ်ထွက်စေပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်စေတာကြောင့် ရှောင်ကိုရှောင်ရပါမယ်နော်..
ကဲ … ကိုယ်တွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ အမှားတွေကို ထောက်ပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ ရှောင်ဖို့က ယောင်းတာဝန် … အိုခေ ? :*
လှခငျြရကျ စကျစကျယိုပွီး လိမ်မျောသီးခှံမဖွဈရလအေောငျ
ယောငျးတို့ရေ … ဒီနခေ့တျေမှာ မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားက မိတျကပျထကျ skincare ဘကျကို ခွဦေးလှညျ့လာကွပါပွီနျော။ ဒါပမေဲ့လညျး တနျဆေးလှနျဘေးဆိုသလို ဒီလိုတှအေသုံးမှားရငျလညျး ခြှေးပေါကျတှကေယျြပွီး လိမ်မျောသီးခှံဖွဈလာတတျတာမို့ သတိထားဖို့တော့ လိုပါပွီနျော…
(၁) အဆီစုပျစက်ကူကို မကွာခဏသုံးတာ
မကျြနှာအဆီပွနျလာတိုငျး မိတျကပျကှကျမှာ စိုးရိမျပွီး အဆီစုပျစက်ကူလေးတှေ ထုတျသုံးတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ မကျြနှာမှာလညျး အပွငျက ဖုနျမှုနျ့နဲ့ ပိုးမှားတှကေို ကာကှယျနိုငျဖို့ အဆီပမာဏတဈခု ရှိရပါတယျ။ အဲ့အဆီလှာကို မကွာခဏ အဆီစုပျစက်ကူနဲ့ ဖယျရှားပဈမယျဆိုရငျတော့ ခြှေးပေါကျတှေ ကယျြလာမှာ ကြိနျးသပေဲမို့ ခဏခဏ သုံးတာမြိုး ရှောငျပါ ယောငျးရေ…
(၂) ဆားဝကျခွံ၊ အဆီဖုနဲ့ ဝကျခွံတှညှေဈပဈတာ
Stella လို လကျအငွိမျမနတေဲ့သူတှကေ အားနရေငျ ဆားဝကျခွံတှေ ညှဈလိုကျ၊ အဆီဖုတှေ ညှဈလိုကျလုပျတတျပါတယျ။ ဝကျခွံထှကျလာရငျလညျး လကျနဲ့ကလိလိုကျရမှာလေ။ ဒီလိုညှဈမိတဲ့အခါ အထဲမှာရှိနတေဲ့ အဆီတှေ၊ ပိုးမှားတှကေ ပိုကွီးလာပွီး ခြှေးပေါကျကယျြစသေလို လကျသညျးဆိပျကွောငျ့လညျး အမာရှတျတှေ ထငျကနျြစပေါတယျ။
Related article >>> ဝကျခွံအရမျးထှကျနတေဲ့အခြိနျမှာ ဒီ (၆) ခကျြကို လုံးဝရှောငျသငျ့ပါတယျ။
မကျြနှာလေးနုခငျြဇောနဲ့ နငျးကနျကွေးခြှတျတာကို ရှောငျပါ။ မကျြနှာကွေးခြှတျဆေးထဲမှာပါတဲ့ ဓာတုပစ်စညျးတှကေ မကျြနှာပျေါမှာရှိတဲ့ ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးတာမှနျပမေဲ့ မကွာခဏဆိုရငျ ခြှေးပေါကျကယျြစတောကွောငျ့ တဈပတျနှဈခါထကျ ပိုမလုပျဖို့လညျး သတိပွုစခေငျြပါတယျနျော..
Stella တို့မိနျးကလေးတှကေ နတေ့ဈဝကျလောကျကြိုးတာနဲ့ မိတျကပျလေးဖို့လိုကျရမှ နသောထိုငျသာရှိတာမှတျလား ? ဒါပမေဲ့ ခဏခဏမိတျကပျဖွနျဖို့တာက အသားအရအေတှကျတော့ ဆိုးကြိုးတှခေညျြးပါပဲ။ သိပျသညျးလှနျးတဲ့ မိတျကပျကွောငျ့ ခြှေးပေါကျတှေ ပိုပိတျပွီး ဝကျခွံတှထှေကျ၊ ကိုယျကညှဈမိ၊ ခြှေးပေါကျတှကေယျြ၊ အဆီပွနျ၊ မိတျကပျဖို့နဲ့ ဂြာအေးသူ့အမရေိုကျနတောပဲ အဖတျတငျပါလိမျ့မယျ။
ခြှေးပေါကျကယျြစတေဲ့အစားအသောကျတှထေဲမှာ သကွားဓာတျလှနျကဲတဲ့အစားအစာတှကေ ထိပျဆုံးကပါပါတယျ။ အရမျးစပျတဲ့အစားအစာတှနေဲ့ ဆီကွျောမုနျ့တှေ၊ နို့ထှကျပစ်စညျးတှကေလညျး ဝကျခွံတှအေဆကျမပွတျထှကျစပွေီး ခြှေးပေါကျကယျြစတောကွောငျ့ ရှောငျကိုရှောငျရပါမယျနျော..
ကဲ … ကိုယျတှေ လုပျလလေု့ပျထရှိတဲ့ အမှားတှကေို ထောကျပွပေးပွီးပွီဆိုတော့ ရှောငျဖို့က ယောငျးတာဝနျ … အိုခေ ? :*
Tags: Beauty, cosmetic, makeup, skincare, tips